यी व्यक्तिले खुर्सानीको तलाउमा पौडी खेले ! [ भिडियोसहित ]::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
यी व्यक्तिले खुर्सानीको तलाउमा पौडी खेले ! [ भिडियोसहित ]
काठमाडौं – दक्षिण चीनको हुनान प्रान्तमा वार्षिक रूपमा खुर्सानी प्रतियोगिता मनाइने गरेको छ । प्रतियोगितामा खुर्सानी खानुपर्छ अनि खुर्सानीको तलाउमा नुहाउनुपर्छ । एक व्यक्तिले तलाउमा नुहाए अनि एक मिनेटमा ५० वटा खुर्सानी खाइदिए ।
उनलाई पुरस्कारस्वरूप २४ क्यारेट सुनको तीन ग्रामको सिक्का दिइयो । प्रतियोगिताको फाइनलमा १० जना पुगेका थिए । तीमध्ये सबभन्दा छिटो ५० खुर्सानी खाने मानिसलाई विजेता घोषित गरियो ।
ताङ शुआइहुइ नामक व्यक्तिले पुरस्कार जित्नुबाहेक सबभन्दा छिटो पीरो खुर्सानी खाने कीर्तिमान पनि आफ्नो नाममा पारे । हुनानमा विगत दुई वर्षदेखि खुर्सानी प्रतियोगिता आयोजना गरिएको छ । यसको थिम लोकल पार्क राखिन्छ । प्रतियोगितामा जोखिम देखेर चिकित्सकहरूलाई पनि बोलाइन्छ ।
खुर्सानी खाने प्रतियोगितामा मानिसहरूलाई खुर्सानी र पानी भरिएको एउटा तलाउमा छिर्न लगाइन्छ । तलाउमा तीन टन खुर्सानी हालिन्छ । खुर्सानी पनि चीनको विशेष पीरो राख्ने गरिन्छ । तर प्रतियोगीहरूलाई छालाको समस्या नहोस् भनी विचार गरिन्छ ।
यी मोडलले ११ करोडको भित्री वस्त्र लगाएर गरिन् कामुक प्रदर्शन
पर्याप्त केचअप नपाएको भन्दै युवतीले यस्तो सम्म पनि गरिन्
युवतीको मन जित्ने यस्ता छन् आठ तरिका
६ युवतीलाई भाडामा राखेर मालिकले बाथरुममा लगाए ९ वटा क्यामरा
सफा र चम्किलो देखिनका लागि कुकुरको पिसाब पिउछिन् यी युवती !
कक्षा ११ मा पढ्ने युवतिको यति सम्मको हर्कत